Iindaba -Ulwakhiwo lwesakhiwo sentsimbi
Indawo yokugcina izinto zesinyithi yenziwa ngokubanzi kuthotho lwesakhiwo sensimbi, kubandakanya neentsika zentsimbi, imiqadi yentsimbi, i-purlin njalo njalo. La macandelo aphambili enza ulwakhiwo oluthwala impahla yokugcina. Ngenxa yobunzima bokukhanya kunye nolwakhiwo olulula, kukho imfuno enkulu yokugcina yolwakhiwo yesinyithi. Istrucutre sentsimbi lolona hlobo longa iindleko lokwenza iiprojekthi ezininzi. Ke ngoko, lixesha lokuba utyale imali kwizakhiwo zokugcina izinto zentsimbi kuqwalaselo lwexesha elide lwezoqoqosho.
Ulwakhiwo lweSinyithi Uyilo lokuGcina
Ubume besinyithi bujongwa njengeyona ndlela yezoqoqosho kwaye ikhawulezayo yokwakha indawo yokugcina impahla, iyenza ukuba ibe yeyona nto iphambili kwizakhiwo ezininzi zorhwebo nezoluntu. Siya kubonelela uyilo yokugcina impahla yesakhiwo, kwaye ngokuxhomekeke kwizicelo zakho ezithile kunye nokubalulwa, amacandelo intsimbi ziya kuyilwa kwiimilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu.
Indawo yokugcina izinto zentsimbi luhlobo lolwakhiwo lwesakhelo, esisakhelo sesakhelo ikakhulu esineentsika kunye neentsika. Isakhiwo sentsimbi singenziwa ngokugumba okushushu okanye okubandayo. Kwophahla lwendlu kunye nepaneli yodonga, sinikezela ngeshiti yesinyithi, iglasi yefayibha, i-PU yesandwich yeenketho kunye nokunye. Isakhiwo sophahla esenziwe ngentsimbi esineengqekembe sikwanokukhetha okuhle kwiprojekthi yakho. Umnyango kunye nefestile yesakhelo sesakhiwo sentsimbi zingenziwa nge-PVC okanye i-aluminium alloy. Ngokubhekiselele kwinkqubo yokuxhasa i-purlin, udonga kunye nophahla lwe-purlin, uhlobo lwe-C kunye nohlobo lwe-Z ziyafumaneka ukuze ukhethe kuzo. Ukongeza, umqadi we-crane we-runway uyile ngokungqinelana neparameter yentloko yakho.
Ngokubhekisele kwimfuno yakho ethile yentsimbi yokugcina impahla kunye neemeko zobume bendawo, indawo yokugcina izinto zentsimbi inokuyilwa nakweyiphi na imilo kunye nobungakanani ukuze zilungele iimfuno zakho.
Kutheni le nto kufuneka ukhethe uLwakhiwo lwentsimbi?
Zininzi izizathu zokuba kutheni kufuneka ukhethe ubume bentsimbi kwindawo yokugcina izinto.
1.Iindleko ezifanelekileyo. Xa kuthelekiswa nezakhiwo zemveli zekhonkrithi, ukwakhiwa kwempahla yentsimbi kuhlala kubiza imali encinci. Onke amacandelo aya kwenziwa kumzi-mveliso, kubandakanya izinto zokomba, ukusika kunye nokudibanisa, emva koko kufakwe kwisiza, kungoko kuya kulinciphisa kakhulu ixesha lokwakha.
Amandla 2.Greater. Ulwakhiwo lwesakhiwo sentsimbi sithatha indawo yekhonkrithi eqinisiweyo kunye neepleyiti zentsimbi okanye amacandelo esinyithi, anamandla aphezulu kunye nokumelana nokunyikima okungcono.
Ukhuselo 3. lokusingqongileyo. Indawo yokugcina izinto eyakhiwe ngesinyithi inobuhlobo kwindalo esingqongileyo njengoko inokusetyenziswa kwakhona kwezinye iiprojekthi, yiyo loo nto iya kunciphisa kakhulu inkunkuma yokwakha.
Ufakelo 4. Ezi ndawo zokugcina iimpahla zentsimbi zinokudityaniswa ngokulula kwaye zakhiwe ngabasebenzi, ngaloo ndlela zisindisa abasebenzi kunye neendleko zabasebenzi.
5.Ukuzinza okuphezulu. Isakhiwo sentsimbi sinokumelana neemeko ezinzima zemo engqongileyo, kwaye ngendlela yokutyabeka ngepeyinti engatshiyo kunye nezinto zealuminium, iya kuthintela umlilo kunye nokugqwala. Ke ngoko, inexesha elide lobomi benkonzo.
Ukunyaniseka okuphezulu. Ubume besinyithi buyakwazi ukumelana nefuthe kunye nemithwalo enamandla, kunye nokusebenza kakuhle kwenyikima. Ngaphandle koko, ulwakhiwo lwangaphakathi lwentsimbi luyinto efanayo.